यो देश जहाँ स्टाइलिस दारी ब्याण्ड गरिदै, यस्तो छ कारण! | बिगुल न्यूज
यो देश जहाँ स्टाइलिस दारी ब्याण्ड गरिदै, यस्तो छ कारण!
एजेन्सी, पाकिस्तानमा स्टाइलिस दारी राख्नेलाई गैर इस्लामिक बताउदै यसलाई ब्याण्ड गर्न माग गरिएको छ । द ट्रिब्यून एक्सप्रेसको अनुसार दारीको नयाँ-नयाँ स्टाइललाई ब्याण्ड गर्नको लागी पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तको डेरा गाज़ी खान डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलले प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस प्रस्तावको अनुसार, दारीलाई नयाँ-नयाँ तरिकाले बनाउनु इस्लामको शिक्षाको विरुद्ध हो र यसको साथै यो सुन्नाहको विरुद्ध पनि रहेको बताईएको छ । यस प्रस्तावको मार्फत यो माग गरिएको छ कि यी पछिल्लो समय युवाहरुमा अलग-अलग तरिकाले दारी राख्ने चलन चलेको छ, जसलाई डेरा गाज़ी खानको डिप्टी कमिश्नर तुरुन्तै ब्याण्ड गरियोस । यति मात्र नभएर यसमा यो पनि भनिएको छ कि जो व्यक्ति दारीलाई लिएर मजाक बनाउछ, उसलाई पनि कडा-भन्दा कडा कारवाही हुनु पर्दछ ।
यो प्रस्ताव व्यक्ति आसिफ खोसा भन्छन् कि सुन्नाह (इस्लामिक शिक्षा) को बारेमा युवालाई जागरूक गर्न निकै जरुरी रहेको छ । रिपोर्टको अनुसार आसिफले भने,’युवा आजकल अलग-अलग तरिकाको स्टाइलिस दारी राख्न थालेका छन् । जुन इस्लामको शिक्षाको विरुद्धमा रहेको छ । फ्रेन्च कट र अन्य नयाँ स्टाइलको दारीलाई इस्लाममा अनुमति दिदैन् ।’ यस प्रस्तावलाई बहुमतको साथ पास गरिएको छ र अगाडिको कारवाहीको लागी डेरा गाज़ी खानको डिप्टी कमिश्नरलाई पठाईएको छ ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन २२, २०७४१९:३४
विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित देश, जहाँ कुनै अपराध हुदैन, पुलिस कसलाई भन्छ भन्ने समेत थाहा छैन कसैलाई पनि !!